Leicester City Oo Guuldaro Xanuun Badan Gaarsiisay Arsenal Xilli Jamie Vardy Iyo James Maddison Ay Sii Xumeeyeen Xaaladda Gunners. | Laacib.net
Laba gool oo ay kala dhaliyeen Jamie Vardy iyo James Maddison ayaa guul siiyay Liecester City kulan ay King Power kula ciyaareen Gunners, waxeyna natiijadaas ka saaciday iney kaalinta 2-aad ee horyaalka si kumeel gaar ah ugu fariistaan iyagoo ka farqi goolal badan Chelsea.
Branden Rodgers ayaa u muuqda mid soo afjaray nolosha Unai Emery ee kooxda Gunners, kadib markii uu guuldaro dhabarka u saaray, waxeyna wiilashiisa sameeyeen wax cajiib ah, waana markii labaad oo xiriir ah oo ay Gunners ku dilayaan gurigooda.
Leicester City ayaa bilowgii ciyaartaba bilowday iney ku raaxeysato kubadda, dhibaato uma marin iney mar walba xakameeyaan kubada, halka Gunners ay qaab difaac ah ku bilowdeen ciyarta.
Daqiiqadii 5-aad: Foxes ayaa sameysay fursadii ugu horreysay ciyaarta, Tielemans ayaa kubad gaadmo ah u gudbiyay Maddison oo ku sugan xerada ganaaxa, balse si fiican kubadda uma tuurin waxaana qabsaday Leno.
Daqiiqadii 6-aad: Aubameyang ayaa dhanka migid kasoo galay, kubad joog hoose ah ayuu soo dhigay, Ozil uma suuragalin, balse Lacazette ayaa isku dayay waxaana ka qalday Evans.
Daqiiqadii 14-aad: Lacazette ayaa lumiyay fursad ay aheyd inuu gool ka dhigo, kubad uu kasoo shaqeeyay Aubameyang ayuuna helay isagoo aan si sax ah u taagnee, geesta ayuuna mariyay.
Daqiiqadii 17-aad: Tielemans ayaa kubad u geesta midig ku siiyay Perez, kaas oo banaanka soo dhigay, nasiib xumo inta aysan gaarin Vardy waxaa soo saaray Chambers.
Daqiiqadii 25-aad: Hector Bellerin ayaa qalday kubad uu la damacsanaa Luiz, waxeyna kubadda u gacan gashay Ayoze Perez oo kubad awood leh goolka aadiyay, balse kor ayey uga kacday.
Daqiiqadii 32-aad: Tielemans ayaa kubad u gudbiyay Ayoze Perez kaas oo isna kubad joog hoose ah soo dhigay xariiqda goolka, Vardy ayaa dhalin karay balse Chambers ayaa qalqal ka galiyay.
Daqiiqadii 41-aad: Maddison ayaa u dhawaaday inuu hogaanka u dhiibo Foxes kadib markii uu laad xor ah ka tuuray geesta midig, si fiican ayuu u qaabeeyay balse birta ayey kaga dhacday iyadoo Leno uu daawanayo.
Qeybta hore ciyaarta ayaa lagu kala maray barbaro gool la’aan ah, Foxes oo gurigeeda joogta ayaa aheyd kooxda dhan walba fiicneed balse goolasha waa laga sinnaa.
Labada kooxood waxey qeybta dambe soo laabteen iyagoo aan wax badal ah sameynin, Foxes ayaa halkeedii kasii waday bandhiggii quruxda badnaa.
Daqiiqadii 48-aad: Nidid ayaa qasaariyay fursad gool loo fishay, Pereira ayaa si fiican uga soo shaqeeyay kubad qurux badan, balse xiddiga reer Nigeria isagoo xerada ku jira ayuu ku fashilmay inuu dhameystiro.
GOAL: Daqiiqadii 67-aad: Jamie Vardy ayaa furay akoonka goolasha Foxes kadib markii uu si aan celis laheyn u dhameystiray kubad uu ka helay Tielemans, waxaana kubadda soo dhigay markii hore Barnes iyo Pereira.
GOAL: Daqiiqadii 75-aad: James Maddison ayaa quus istaajiyay Gunners, xiddiga reer England si fudud ayuu kubad joog hoose ah shabaqa u dhex dhigay markii uu kubad ka helay Vardy.
Foxes si fiican ayey u maamuleen ciyaarta inteeda badan, waxeyna heleen guul ay u qalmeen kadib kulan ku dhamaaday 2-0.
Kooxda uu hogaamiyo Branden Rodgers ayaa gaartay guul weyn oo ka saaciday iney kaalinta 2-aad ee horyaalka ku fariisato iyadoo farqiga goolasha kaga horreysa Chelsea.